Amaski wezinwele zokuhlukaniswa. Izindlela zokupheka eziningana zokugqoka izinwele zekhaya ngezinqamuko zokuhlukaniswa.
Kulesi sihloko sizokunika izinketho eziningana zemaski ezinika ukuphila nokubuyisela izinwele zokuhlukanisa. Kodwa okokuqala, ake sibone ukuthi kungani izinwele zigawulwa.
Izinwele ze-Sekushchiesya zivela ngenxa yokunakekelwa okungalungile kubo, nokusetshenziswa kwezindlela ezingalungile ekufezeni ubuhle. Ukusetshenziswa kwamagesi amakhemikhali, ukugcoba, ukugcoba ngamapayipi anonya nokuvusa ukuma kwawo, futhi, njengoba kwaziwa, kuholela esigabeni esiphambene. Le nqubo ibukeka kanje: ezimpilweni zezinwele, izilinganiso ezingaphezulu kwezinwele ziqala ukuphakama futhi zinezinhlangothi zonke. Ngenxa yalokhu, izinwele ziqala ukwehlukanisa futhi ziqede ekugcineni. Uma le nkinga iqalwa, khona-ke isikhwama singasakazeka kuyo yonke ubude bezinwele, kancane kancane sizobuthakathaka futhi sibe yizinkinga futhi zibuthakathaka. Zonke izinhlobo zezinto ezinobungozi zizokwazi ukungena ezingenakwenzelwa phakathi kwezinwele, okuzokwenzeka ngokuhamba kwesikhathi zizofa. Yiqiniso, uma engasiphuli ngaphambi kokufa ngesikhathi efa.
Izimbangela zezinwele ezihlukaniswe
Isizathu esiyinhloko nesibaluleke kakhulu sokuhlukaniswa kwezinwele ukuma kwawo. Ukusebenzisa izinhlobo zamakhemikhali ahlukene ezinwele - uketshezi olwenziwe nge-curling noma uqondisa izinwele, usebenzisa udayi wezinwele, noma yikuphi ukucacisa, njll, sidala zonke izimo zokuma kwazo. Futhi, kuvunyelwe ukuba ugeze izinwele nge-seseti, ngoba cishe iyabancipha ngokuphelele, okubangela ukulimala okukhulu. Futhi phezu kwezinwele, ngisho nangemva kokugeza inhloko yakho, kufanele kube ne-sebum encane efaka isikali esikhwameni sayo.
Indawo yesibili ohlwini lwesitha sezinwele ezinempilo, ezingenayo i-split, kunezinhlobo zonke zokufaka izinsimbi zokuwaqondisa, ukugoqa izinsimbi, izimpukane, izinwele zokugqoka izinwele, njll. Phela, zibuye zenzeke izinwele zazo ngokushisa kwazo, ngenxa yalokho iba buthakathaka futhi ibuhlungu. Ukweba izinwele kungabangela kanye namanzi ngezinga eliphakeme lokuqina, isibonelo, njengamanzi olwandle.
Ngokwemvelo, umuntu kufanele futhi athi hhayi nje ithonya langaphandle, kodwa nezici zangaphakathi zomzimba wakho zingaholela enkingeni yezinwele ezihlukaniswe. Isibonelo, uma ungenayo i-vithamini noma i-metabolism, engabangela izinwele ezomile.
Uma ungumnikazi wezinwele ezinde, khona-ke nawe ungabhekana nenkinga enjalo engathandeki njengenwele ehlukaniswe. Phela, ngesikhathi isikhumba sezinwele sigcwele i-sebum, asifinyeleli ekupheleni kwezinwele, okuholela ekumekeni kwawo. Ngenxa yalokhu, izikali ekupheleni kwezinwele ziyizinkinga. Ngakho-ke, safika endleleni yokusiza izinwele zethu ezinomsoco, ezinomile. Kule ndaba sizosiza ama-masks. Ngokuvamile, esikhathini sethu awukwazi ukukhathazeka ngokuzilungiselela ukugqoka izinwele, ngoba emashalofini ebumnyameni bawo kubumnyama. Kodwa, ungaphambuki, ukuthenga amasiki kufaka yonke imakhemikhali efanayo esifuna ukuyilahla, ukuze sithuthukise izinwele zethu. Kodwa emakhambi ama-folk izithako konke kungokwemvelo. Ayibangeli ukusabela okwenziwe okwehliswayo futhi yenze ibe eshibhile kakhulu ukuphuma.
Ukupheka ngamaski ezinwele zehlukaniswe
Isibonelo, i-mask yogurt. Faka isicelo se-scalp nezinwele, ubisi olufudumele ngamaminithi angu-30, bese ugeza ngamanzi afudumele. Ngenxa yalokho, uthola izinwele eziluhlaza futhi ezikhanyayo. Kukhona izinqubo ezintathu ngokwanele ukuthi zivele zibe mnandi ngendlela enomusa nangokomthinta. I-Kefir iqinisa izinwele, iqede ukubhala nokuma.
Ungasebenzisa futhi i-mask yamaqanda, esetshenziswa esikhwameni bese usakazwa phezu kwazo zonke izinwele imizuzu engu-30-40. Ukuze ukwenze, udinga ukuthatha i-yolk eyodwa ye-i-yolk, isipuni samanzi kalamula, amafutha amaningi wemifino bese uwaxuba nehafu yengilazi yamanzi abilayo. Okokuqala kufanele kugezwe emanzini apholile, bese ugeza kuleso sombululo: kwelinye ilitha lamanzi, qhafaza isipuni esisodwa samanzi kalamula. Le mask ikondla ikhodi yekhanda, ithuthukise isakhiwo sezinwele, idala isithiyo ekulahlekelweni komswakama.
Ukuze ulungiselele imaski yezinwele ezihlukanisiwe, ungasebenzisa i-peach enekhono lokushelela futhi livale izikwele ngezinwele ezihlukanisayo. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuhlanganisa futhi uhlanganise ama-peaches amabili, engeza izipuni ezintathu zobisi olusha, amaconsi ayisithupha amafutha e-oregano. I-mask kufanele isetshenziswe ezinyaweni futhi ihlanzwe ngamanzi afudumele kanye ne-shampoo ngemuva kwemizuzu engu-30-40.
Kukhona futhi imaski yobunikazi ekupheleni kokuhlukaniswa. Le mask kusiza ukuqinisa nokuthuthukisa izinwele. Ukuze wenze le maski, udinga ukuthatha isipuni esisodwa soju, ama-tablespoons amane anyanisi, okudingeka uwahlanganise, bese ufaka kule nhlanganisela ithisipuni eyodwa yomnqumo ofudumele noma amafutha omifino. Sebenzisa i-mask kukho konke ubude bezinwele futhi ugeze ngamanzi apholile bese uhlamba emva kwemizuzu engu-50.
Ukusiza izinwele zokuhlukanisa zibuye zibuyele futhi zisetshenziswe ukhilimu omuncu. I-Horseradish kusiza ukuqinisa ukuqhuma kwegazi esikhumbeni, kuyilapho uqinisa izinwele, futhi ziqala ukukhula ngokushesha. Futhi ukhilimu omuncu unendawo yokunciphisa ukuhlukumeza kwama-bulseradish nokudla ama-hair bulbs. Ukuze ulungise le mask udinga ukufaka impande eyodwa ye-radish ye-horse kahle, futhi esitsheni se-ceramic uxube nge-isipuni esisodwa sikhilimu omuncu ngesilinganiso esifanayo samafutha omquba. Ngemuva kokusebenzisa i-mask ezinwele, kudingeka badonswe nge-polyethylene nethawula ngamaminithi angu-30. Bese uwagezela ngamanzi afudumele kanye ne-shampoo.
Ngaphezu kwamaski kakade izinwele ezihlukanisiwe zingenziwa ekuvinjeni kwalesi simo esingathandeki. Kungenzeka ngendlela ejwayelekile futhi ngokufanele ukunakekela izinwele ukuthi le nkinga ayikuthintanga. Nakhu okudingeka ukwenze kulokhu:
Geza izinwele zakho ngokwezinga lokungcola bese ukhetha imoto efanelwe nawe;
ngemuva kokuhlanza izinwele ngamunye udinga ukusebenzisa i-conditioner efanelekayo kubo;
zama ukubamba izinwele zakho ngobumnene, usebenzisa ikhefu lezinkuni nebhashishi, okuzosiza ukusabalalisa i-sebum ngokusebenzisa izinwele.
zama ukusebenzisa i-dryer yezinwele nezinye izinto zikagesi ezidlula izinwele zakho.
Ungasebenzisi udayi kaningi kaningi ngaphezu kwenyanga. Manje ungasebenzisa ama-hair amancane angenayo i-non-ammonia.
Lezi maski ezilula zokwehlukanisa izinwele ekhaya zizokuvumela ukuba unikeze ukunakekelwa kwezinwele ezinhle kakhulu futhi uziqinise futhi ungazwakali!
Izindebe ezinhle nezitfombe ezithweswa iziqu izinwele ezide eziphakathi
Izinwele zebusuku zezinwele ezinde
Izinwele ezinamafutha: ukuqeda izimbangela
Idayisi enezikhonkwane kanye nama-raspberries
Ama-Bigos kusuka ku-sauerkraut
Kuthiwani uma ngingeke ngamukele isoka lami njengoba ekhona?
Isisekelo sokuzenzela: indlela ongakhetha ngayo nokuthi ungayisebenzisa kanjani
Izindlela ezingasiza ekufundeni ngomuntu okuningi
Ukwandisa i-lymph nodes ezinganeni
Usuku lukaTatyana - Usuku lwabafundi 2016
Isibonelo sengubo yentombazane
Ukuhambisana kweHoscope Ukufanelana Nesifazane - I-Cancer
Ukukhohliswa komuntu othandekayo
Indlela yokuxhumana nomntwana esiswini